Tim Cook, na njem ya na China, na-agbachitere na ijikọ ụwa ọnụ dị mma maka mmadụ niile | Esi m mac
Tim Cook, na njem ya na China, na-agbachitere na ijikọ ụwa ọnụ dị mma maka mmadụ niile
Tim Cook, nọ na China kemgbe ngwụsị izu gara aga. Ebumnuche ya juputara na nzukọ, n'ihe gbasara ijikọ ụwa ọnụ, nchedo cybersecurity na mmekọrịta mba ụwa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọha ọha mere na Satọde gara aga na Nzukọ Ọganihu China. Ọ bụ ogbako kwa afọ nke gọọmentị China na-ekere òkè na ya. N'ozuzu, onye nwere ọpụrụiche na-aga imezi mmekọrịta ya na mba Eshia. N'okwu a, Cook chọrọ iweta ụlọ ọrụ ahụ nso na ndị ahịa China. Onye isi nke Apple kwuru okwu otu awa na-ekwu banyere nsogbu dị iche iche zuru ụwa ọnụ.
N'otu oge n'okwu ya, Tim Cook kwuru ihe ndị a:
Ijikọ ụwa ọnụ, n'ozuzu, dị mma maka ụwa, mana ọ na-eweta uru mmekọrịta ọha na eze na mgbe ụfọdụ enweghị ike kesaa ọ bụla n'ime obodo ma ọ bụ mba ọzọ. N’agbanyeghi adịghị ike ndị a, mba agaghị agbanahụ njikọ ụwa ọnụ na mmepe.
Echere m na ihe kachasị njọ ga-abụ iche na, ebe ọ bụ na ọ naghị anabata onye ọ bụla, ọ dị njọ ma yabụ na anyị ekwesịghị itinye ya n'ọrụ. Enwere ike ichoputa ya na mba ndi na ekewapu onwe ha, na onu ogugu ha adighi enweta mmeri.
Ọ bụ ihe mgbagwoju anya maka ụlọ ọrụ. Cheta na a na-eme ọtụtụ n'ime arụmọrụ ya na China. Onye isi ala Donald Trump, kpọrọ Apple na nso nso a ịrịọ ka ha rụpụta ngwaahịa ha na United States, dị ka ihe iji kpalite akụ na ụba nke mba America.
Na mgbakwunye na ikwu okwu ọzọ banyere uru nke ijikọ ụwa ọnụ, ọ chọrọ imepe ngalaba na Cybersecurity na Nzuzo Onye ọrụ Apple. Ana m eji ohere echeta nke ahụ Apple na-eji oke njedebe zoro ezo, n'ebumnuche nke ichebe ndị ahịa ya. Otú ọ dị, ọ kwughị banyere iwu nchekwa cybersecurity nke China, nke chọrọ ka ụlọ ọrụ nye data data onye ọrụ. Kama nke ahụ, o nyere ihe atụ nke ihe ụlọ ọrụ ahụ mere n'ihe metụtara nchọpụta FBI banyere iPhone nke ndị na-eyi ọha egwu, bụ nke ọ gara n'ụlọ ikpe iji chebe onye ọrụ ahụ.
Cook ọzọ nzukọ ga-ewere ọnọdụ na Monday na Xu lin, Nchịkwa Cyberspace nke China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tim Cook, na njem ya na China, na-agbachitere na ijikọ ụwa ọnụ dị mma maka mmadụ niile
Ndị Fristobal Cristobal dijo
Chọpụta, ọ dị mma maka ụlọ ọrụ gị. A sụgharịrị n'asụsụ kwa ụbọchị, anyị na-arụpụta na China ebe ọrụ dị ọnụ ala ma anyị na-ere ngwaahịa anyị na ọnụahịa ka elu; belata ego na uru kachasị.
Zaghachi Cristobal Fuentes
Gburugburu ụwa site na Mac gị
LeadMail na-enye anyị ohere iziga ọtụtụ ozi ịntanetị